ပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို ခဏခဏ ပြန်ဖတ်ကြည့် ပါ၊ ဒါဆိုရင် ပြန်ပြောမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး - Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge ပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို ခဏခဏ ပြန်ဖတ်ကြည့် ပါ၊ ဒါဆိုရင် ပြန်ပြောမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
ပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို ခဏခဏ ပြန်ဖတ်ကြည့် ပါ၊ ဒါဆိုရင် ပြန်ပြောမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
အမေ့ကို အာခံ၍ ပြန်မပြောခင် တစ်ခုသော နံနက်ခင်း အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကောင်လေး တစ်ယောက်အား အိပ်ယာမသိမ်းမိလို့ မိခင်ဖြစ်သူက
“ထမင်းစားချိန် မှန်းလဲမသိ အပြင်ထွက်လည်း မိဘဆီ ခွင့်မတိုင် ကြည့်စမ်း ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ တစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့နေ. . .” အစရှိသဖြင့် ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာ သားဖြစ်သူက သီးမခံနိုင်လို့ “ဟာဗျာ အမေကလည်း ကျွန်တော်က ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး တစ်နေ့လုံး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့ နားငြီးတယ် ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော် ကြိုက်သလိုနေပေါ့ အမေမစပ်စုချင်ပါနဲ့..လို့ သူ့အမေကို အသံကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်
အမေကတစ်လှည့် သားကတစ်လှည့် စကားများကြရာက အနီးအနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ အဖေဖြစ်သူက ကြားပြန်ဖြေတဲ့ အနေနဲ့ သူ့သားကို ခေါ်လိုက် ပါတယ်။ “သားရေ..အဖေ့ဆီ လာပါဦးကွာ” သားဖြစ်သူက ခြေဆောင့်ရင်း အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းသွားပြီး အဖေခေါ်ရာကို လိုက်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဖေဖြစ်သူက သားပခုံးကို လှမ်းဖက်ရင်း အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက် ထွက်ခဲ့ပါတယ် “သား..ဘာဖြစ်လို့ အမေ့ကိုပြန်ပြောနေ ရတာလဲ” “အဖေကလည်း ကျွန်တော်က ကလေးမှမဟုတ်တော့တာ နေ့တိုင်းလိုလို ကျွန်တော်ကို အပြစ်မြင်နေတယ် နေ့တိုင်း ဆူပူနေတယ် ကျွန်တော် ဒီအိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူး ဖေဖေရယ်”…. “အော်..သားက မေမေ့ဆို ဆုံးမ စကားတွေ ဆူတယ်လို့ ထင်နေတာကိုး မေမေ မဆူအောင် မေမေ့ပြောတဲ့ အတိုင်း ငါ့သားနေပေါ့ကွ” “ဖေဖေလည်း မေမေ့လိုပဲ သားကို မချစ်ဘူးပေါ့ “ “မဟုတ်ပါဘူးသားရယ် ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကို လမ်းမှားမရောက်စေချင်ဘူး ကြိုတင်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုဆုံးမနေတာ” “တော်ပြီ..ဖေဖေလည်းမေမေ့လိုပဲ သားကို အကောင်းမမြင်ဘူး ဆူဖို့ပဲ”
“ကဲ ဖေဖေတစ်ခုပြောမယ် သေချာ နားထောင်” “ဘာပြောမှာလဲဖေဖေ သားနားထောင်နေတယ်” “သားက မေမေ့ကို တစ်ခွန်းမကျန် အာခံပြန်ပြော တယ်နော် သား သေချာစဉ်းစား” “သား ပြန်ပြောမှာပေါ့ဖေဖေ နေ့တိုင်းဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် ဆိုတော့ သား နားငြီးတယ်” “ကဲ ဒါဆိုဖေဖေ အချက် ၁၀ ချက်ပြောပြမယ် အဲဒီအချက် ၁၀ ချက်လုံး သားလိုက်နာနိုင်ရင် သားမေ့မေ့ကို ကြိုက်သလိုအာခံပြီးပြန်ပြောလို့ရပြီ” “ပြောပါ ဖေဖေ သားနားထောင်ပါ့မယ်” ဒါဆိုသေချာနားထောင် ၁။။ သုံးလတိတိ သားထမင်းစားပြီးတိုင်း အန်နိုင်မလား ?
၂။။ သားရဲ့ဝမ်းဗိုက်ထဲဘောလုံးထည့်ပြီး ကြီးမားလာအောင် တစ်လတစ်ခါ ရေထိုးသွင်းမယ် တစ်ဆယ်လတိုင်တိုင် သားအလေးခံပြီး သယ်ထားနိုင်မလား?
၃။။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မုန့် အစားအစာတွေ မစားပဲ ခြောက်လတိုင်တိုင် အငတ်ခံနေနိုင်မလား ?
၄။။ ညညအိပ်ရင်လည်း ဘယ်ညာ မစောင်းပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ၅ လတိုင်တိုင် အိပ်နိုင်မလား … ?
၅။။ ၈ လတိုင်တိုင် ဆော့ကစားတာတို့ လျှောက်လည်တာတို့ ကခုန်တာတို့ မလုပ်ပဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေနိုင်မလား?
၆။။ နာဖျားလို့မရှိအောင် ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်နေရလို့ ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေ မစားပဲနေမယ် ဖျားနာခဲ့ရင်တောင် ဆေးတွေစိတ် ကြိုက်စားခွင့်မရှိပဲ ၁၀ လအထိ သားနေနိုင်လား ?
၇။။ ၁၄ နာရီအကြာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး နာကျင် ကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာ သားခံနိုင်မလား … ?
၈။။ ကိုယ့်နို့သီးခေါင်းကို ကိုက်ရင် နာပေမယ့် ၁၀ လအထိ အောင့်အည်းသီးခံနိူင်မလား … ?
၉။။ ချီးတွေ၊ သေးတွေ၊ အန်ဖတ်တွေ ၂ နှစ်တိုင်တိုင် သားကကြုံးနိုင်မလား … ?
၁၀။။ ညညဆိုရင်လည်း နှစ်နာရီတစ်ခါ တစ်နှစ်လုံးလုံးအိပ်ရေး ပျက်ခံပြီးထနိုင်မလား … ?
” ကဲ..သား အဲဒီအချက်၁၀ ချက် လိုက်နာလို့နိုင်မလား တကယ်လို့ သားက တစ်ချက်မကျန် လိုက်နာနိုင်ရင် မေမေ့ကို ကြိုက်သလို အာခံပြီး ပြန်ပြောလို့နိုင်ပြီ”…..သားဖြစ်သူက ခေတ္တမှိုင်ပြီး အတွေးတစ်ခုဝင်လာကာ “ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ သားနားလည်ပါပြီ နောက်ဘယ်တော့မှ
မေမေ့ကိုရော ဖေဖေ့ကိုပါ သားပြန်မပြောတော့ပါဘူးလို့ သားကတိပေးပါတယ်ဖေဖေ”….“ကဲ..သားလိမ္မာလေး မေမေ့ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပြီး ကန်တော့လိုက်နော်သားလိမ္မာ၊သမီးလိမ္မာလေးများဖြစ်ကြပါစေ”